सामूहिक बलात्कारपछि युवतीलाई जिउँदै जलाइयो, भिडियो भाइरल भएपछि मात्र मुद्दा दर्ता ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
सामूहिक बलात्कारपछि युवतीलाई जिउँदै जलाइयो, भिडियो भाइरल भएपछि मात्र मुद्दा दर्ता !
एजेन्सी/भारतको अलीगढस्थित चन्डौस इलाकामा युवतीलाई घरमा एक्लो पाएर दुई युवकले सामूहिक बलात्कार गरे । त्यसपछि पहिचान उजागर हुने डरले आरोपीले पीडितलाई आगो लगाइदिए ।
युवतीको चिच्याहट सुनेपछि छिमेकी घटनास्थल पुगे र उनलाई अस्पताल पुर्‍याए पनि उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भयो । घटना अक्टोबर ३० तारिखको हो । घटनाको एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यसमा पीडितले आरोपीको नाम बताइरहेका छन् । घटनाको तीन दिनपछि पुलिसले मुद्दा दर्ता गरेको छ । आरोपी फरार छन् ।